မောင်လူပေ – တော်ဝင်မင်္ဂလာတဲ့
မောင်လူပေ – တော်ဝင်မင်္ဂလာတဲ့ (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ဟုတ်ကဲ့။ လေဒီဒိုင်ရဲယာနာရဲ့သားငယ်လေး ဟယ်ရီရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့။ တကမ္ဘာလုံးက သဲသဲလှုပ်နေကြတယ်။ဟယ်ရီဆိုတာ အင်္ဂလန် ဘုရင်မကြီးရဲ့မြေးတော်လေး။ ဘုရင်ဖြစ်ဖို့စာရင်းမှာ ခြောက်ဦးမြောက်မင်းသားလေး။ အဖေက ဘုရင်မကြီးရဲ့သားကြီး၊ အမေကလည်း နန်းသွေးအပြည့်ပါတဲ့ မင်းသမီးလေး။ ဒီတော့ မင်းသားလေးဟယ်ရီက တော်ဝင်သွေးအပြည့်ပေါ့။ ရှေးကဆို တော်ဝင်သွေးကို မရောအောင်ဆိုပြီး မောင်နှမအရင်းတွေတောင် ပေးစားကြတယ်။ အဖေတူ အမေကွဲတွေ ယူကြရတယ်။ မင်းဆွေမင်းမျိုးတွေမို့ သွေးနှောမှာကြောက်ကြတာပေါ့။ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ယူကြရတော့ အိမ်ထောင်ရေးတွေက အဆင်ပြေတာလည်းရှိ၊ မပြေတာလည်းရှိ။ မင်းသားလေးဟယ်ရီရဲ့ မိဘတွေလည်း တော်ဝင်သွေးဆိုပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကြတော့ တော်မဝင်ကြဘူးရယ်။ ချားလ်မင်းသားရဲ့ ငယ်ရီးစားက အသက်ကြီးကြီး အိမ်ထောင်ကြီးနဲ့မိန်းမ။ အမေဘုရင်မကြီးက ဒိုင်ယာနာမင်းသမီးလေးနဲ့အတင်းပေးစား။ အသက်က ထက်ဝက်လောက်ကွာနေတော့ အတွေးမတူ၊ မယူအဆမတူ။...
မိုနေးသစ် ● မေ​မေ (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ​မေ​မေက​ရှေးဘယ်​နှတန်း​အောင်​ခဲ့လဲမသိဘူး။ ​ရေးတတ်​ဖတ်​တတ်​​တော့ရှိခဲ့ပါတယ်​။ အဖိုးအဖွားတို့ရဲ့​တောင်​သူလယ်​ယာလုပ်​ငန်း​တွေကို ကူညီလုပ်​ကိုင်​ရင်း အတန်း​တွေမတက်​ခဲ့ရဘူးထင်​ပါတယ်​။ ​မေ​မေကစာ​ပေ​တော့ဝါသနာပါပုံပင်​ ကျ​နော်​တို့ကိုငါးရာ့ငါးဆယ်​နိပါတ်​​တော်​​တွေထဲကပုံပြင်​​တွေကို ​ပြောပြ​လေ့ရှိပါတယ်​။ မှန်​ကန်​​ဖြောင့်​မတ်​ခြင်းကိုတန်​ဖိုးထားတဲ့​နေရာမှာ ​မေ​မေက ပထမတန်းပဲဖြစ်​မယ်​ထင်​ပါတယ်​။ ငါးပါးသီလလုံခြုံဖို့ ခဏခဏ​ပြောပြရှာပါတယ်​။ ​မေ​မေ့လက်​​ရေး​တွေကမလှ​ပေမယ့်​ အဓိပ္ပါယ်​​ပေါက်​​အောင်​​တော့ စာ​ရေးတတ်​ပါတယ်​။ ​နေ့စဉ်​ကျ​နော်​တို့ရဲ့​ကျောင်းဝတ်​စုံ​တွေကို​လျှော်​​ပေးဖို့ဘယ်​​တော့မှပျက်​ကွက်​​လေ့မရှိပါဘူး။ ကျ​နော်​သူငယ်​တန်း စတက်​​တော့ ​ကျောင်းအပ်​ပြီးကျ​နော့်​ကိုစာသင်​ခန်းထဲတ​​ယောက်​တည်းထားခဲ့ဖို့ကြိုးစား​ပေမယ့်​မ​အောင်​မြင်​ခဲ့ပါဘူး။ ​မေ​မေ့​အနားကိုကပ်​​နေပြီး ​အော်​ဟစ်​ငိုယို​နေခဲ့တာ​ကြောင့်​ပါ။ ဒါ​ကြောင့်​ ​မေ​မေက စာသင်​ချိန်​ ​တောက်​​လျောက်​ အခန်းအပြင်​က​နေငုတ်​တုတ်​ထိုင်​​စောင့်​​နေရရှာပါတယ်​။ သူငယ်​တန်းတ​နှစ်​လုံးလည်း​မေ​မေဒုက္ခခံခဲ့ရှာပါတယ်​။ ကျ​နော့်​ကို မဆဲဆိုရက်​ မရိုက်​ရက်​ပါ။ ​မေ​မေ ကျ​နော့်​ကို​မွေးဖွားခါနီး​တော့ ကျ​နော့်​ရဲ့အဖွား​မေ​မေ့ရဲ့အ​မေကို ​အိပ်​မက်​မက်​တယ်​လို့ခဏခဏ​ပြောဖူးပါတယ်​။ အဲဒီ​နောက်​ကျ​​နော်​​မွေး​​တော့ကျ​နော့်​ကို အဖွားဝင်​စားတာလို့တ​ထစ်​ချထင်​​နေခဲ့တာ ပါ။ ​ကျ​နော်​ကလည်း ​မေ​မေမှ​မေ​မေတ​ချိန်​လုံးဘယ်​သွားသွား တ​ကောက်​​ကောက်​လိုက်​တတ်​ခဲ့သူပါ။ အဲဒါ​ကြောင့်​လည်း​မေ​မေကကျ​နော့်​အ​ပေါ်ပိုပြီးတွယ်​တာတာဖြစ်​မှာပါ။ ကျ​နော့်​အတွက်​ဆို​မေ​မေအပင်​ပန်းအဆင်းရဲအ​တော်​ခံခဲ့ရှာပါတယ်​။ ကျ​နော်​ကလည်း အလိုလိုက်​ခံရသူပီပီ ဆိုးနွဲ့ခဲ့ပါတယ်​။ ကျ​နော်​က​မွေးချင်းထဲမှာအငယ်​ဆုံးသားမို့အလိုလိုက်​တာလည်းပါမှာပါ။ ...
မျိုးတေဇာမောင် ● တိုးမာ့ရှ် ဆာလမန်းရဲ့ကဗျာ (၂) ပုဒ် Tomaž Šalamun (1941-2014) (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ဆလိုဗေးနီးယန်း ကဗျာဆရာ တိုးမာ့ရှ် ဆာလမန်း (၄၊ ဇူလိုင်၊ ၁၉၄၁ -၂၇၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၄) ကို စစ်ပြီးခေတ် အလယ်ဥရောပ နီယို အာဗွန်းဂတ်ကဗျာရဲ့ဦးဆောင်ကဗျာဆရာအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ သူကို့ Absurdist တယောက်လို့လည်း ပညာ ရှင်တချို့က သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ “ဘဝမှာ ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေ မရှိ” လို့ လက်ခံသူလို့ ပြောနိုင် မယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကဗျာဗေဒဟာ ဥရောပအဟောင်းနဲ့ အမေရိက ကြားပေါင်းကူးပေးတဲ့ ကဗျာဗေဒတံတားလို့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၃ ရက်နေ့ထုတ် The Hour...
မောင်စွမ်းရည် ● အမေ.. အမေ.. အမေ (မိုးမခ) မေ ၁၉၊ ၂၀၁၈ ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်စင်မျာ ”ဂေါ်ကီ” ရေးတဲ့ ”အမေ” စာအုပ်နဲ့အတူ တခြားစာရေးဆရာတစ်ယောက်ရေးတဲ့ ”အမေ” စာအုပ်တအုပ်လည်း ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ ”လူ” ဆိုတာ ဘယ်သူမဆို သမ္မတဖြစ်ဖြစ်၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ သူတောင်းစားဖြစ်ဖြစ်၊ လူမိခင်၊ လူအမေက မွေးတာချည်းပဲ မဟုတ်လား။ အမေ့ရင်ခွင်မှာ အမေ့နို့ချိုကိုစို့ပြီး လူဖြစ်လာကြတာတွေ။ အမေကတော့ မေတ္တာနို့ချိုတိုက်ကျွေးပြီး လူလေး တွေကို လူဖြစ်အောင် မွေးလိုက်တာပဲ။ ပြီးမှ လူမမဖြစ်ဘဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သွားကြတာတွေလည်းရှိမှာပေါ့။ အမေကတော့ အမေပဲ။ ဒီလ မေလလေ။ မေလကိုဝင်လာတော့ အမေရိကန်စာနယ် ဇင်းတွေမှာ အမေ့အတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးကြပါဆို့ပြီး လက် ကိုင်အိတ်၊ စိန်၊ ရွှေလက်ဝတ်ရတနာ၊ ဆွယ်တာ၊...
K ငြိမ်းချမ်း ● ဘာလဲ မြို့ချစ်စိတ်၊ ဘယ်လဲ နိုင်ငံချစ်စိတ် (မိုးမခ) မေ ၁၉၊ ၂၀၁၈ ၂ဝ၁၇၊ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရခိုင်အရေးကိစ္စများကြောင့် ဝေဖန်မှုနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ ခံနေရတာ လူတိုင်းအသိဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောဒေသတလျှောက် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးများအပေါ် အခြေ ခံကာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာမီးပွားများကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမှန်/မှား ပြောဆိုဖို့ထက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စွပ်စွဲပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနေရတာ မြင်နေကြားနေရပါ တယ်။ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်များဖြင့် မိမိတိုင်းပြည်အပေါ် အထင်မြင်လွဲမှားမှုများကို တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်မဟုတ်ဘဲ အားသွန်ခွန်စိုက်ကို ပြုမှုဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ စဉ်းစားမိတာ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မြို့ရွာချစ်စိတ် လူမျိုးရေးချစ်စိတ်တို့ဆိုတာ ဘယ်လိုပေါက်ဖွားလာသလဲ။ အဲဒီ အချစ်စိတ်တွေ လွန်ကြူးသွားရင်လည်း အစွန်းရောက်သွားတတ်ကြောင်းလည်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိပါတယ်။ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ငါစွဲတွေထက်ကျော်လွန်ကာ...
အိဏ်ဝေး ● စိတ်​ရဲ့ထွက်​​ပေါက်​ဟာ စိတ်​ထဲမှာ (မိုးမခ) မေ ၁၈၊ ၂၀၁၈ သည်း​ခြေပျက်​တဲ့အထိ ရူးသွပ်​ဖူးသူဟာ ပကတိတည်​ငြိမ်​မှုကို အပြည့်​အဝခံစားမိလိမ့်​မယ်​ လူတယောက်​ ည​နေခင်း ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​တစ်​လိပ်​ ph no တ​ခု၊ ဘာကို​ရွေးချယ်​မလဲဆိုတာ အချိန်​ကြာကြာစဉ်းစားဖွယ်​မလိုဘူး အရှိန်​မကုန်​​သေးတဲ့ မီးစာက အ​တွေး​တွေကို ပိုပြီး ထက်​သန်​​စေတယ်​။ မ​ခေါ်ဖြစ်​​တော့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်​က ည​နေခင်း​တွေကို ပိုပြီး ခုံမင်​တတ်​​စေတယ်​။ ယုံကြည်​ရာက မရှိခြင်းသ​ဘောကို ​ဆောင်​လာတဲ့အခါ မရှိခင်းသ​ဘောကို ​စေ့​စေ့ကြည့်​​နေမိတယ်​။ ပျက်​သွားတဲ့ အကြည်​ဓာတ်​က​လေး​တွေ ​ငွေ့ရည်​ဖွဲ့​နေတဲ့ နံနက်​ခင်း​လေး​တွေ၊ တချက်​​လောက်​ ​တောက်​ချလိုက်​တာနဲ့ အလွဲလွဲအစင်​စင်​၊ ဖမ်းဆုပ် ထားချင်​မိတာ မှားမိတာမျိုး​ပေါ့။ ဒီလိုမျိုး … နံနက်​ခင်း​တွေဟာလည်း အဓိပ္ပါယ်​မဲ့လာတယ်​။ ဗဟိဒ္ဓတရား​ဟာ ပြုပြင်​လို့မ​ကောင်းတဲ့ လက်​​ဆောင်​တစ်​ခု အဇ္ဈတ္တတရားကို ငါပိုင်​စိုးကြည့်​တယ်​...
ကာတွန်းညီထွေးရဲ့ မီးစက်ကြီးတွေ ပျောက်နေတယ်နော် … (မိုးမခ) မေ ၁၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းညီထွေး Related posts No related posts.
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၈)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၈) (မုိုးမခ) မေ ၁၈၊ ၂၀၁၈ ပညာရေး၊ ဥပဒေရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးစသည့် လောကီအမှုကိစ္စ အ၀၀တွင် ဘာသာရေး အရိပ်အငွေ့များ လွှမ်းမိုးမှုကင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြချိန်တွင် တိဗက်တို့ ကတော့ သူ့အိပ်မက်တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့က Secularism ကို သိပ်လိုလိုလားလား မရှိတတ်ကြ။ တိဗက်လူမျိုး ခုနှစ်သန်းကျော်တွင် သုံးပုံတစ်ပုံက ဘုန်းကြီးသီလရှင်များဖြစ်နေကြပါသည်။ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမ များက တိဗက်လူမျိုးတို့၏ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီအထိ စိမ့်ဝင်နေကြပြီး သူတို့၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းများတွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များက ပိုများနေလေ့ရှိသည်။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာပွဲများ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ မွေးနေ့စသည့် အခမ်းအနား ပွဲလမ်းသဘင်များကို ဘာသာရေးအရိပ်အောက်တွင်...
အတန်ကြာရပ်နားထားတဲ့ POETA ကဗျာနှင့်​ရသ စာ​စောင်​ ပြန်ထွက်တော့မယ် K (မိုးမခ) မေ ၁၈၊ ၂၀၁၈ POETA ကဗျာနှင့်ရသစာစောင် အမည်ရတဲ့ စာပေမဂ္ဂဇင်းတစောင် ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေပြီးနောက် ရပ်နားထားရာမှ ယခု ဇွန်လအမီ ပြန်လည်ထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကဗျာဆရာ မိုးကျော်သိန်းထံက သိရပါတယ်။ စာမူ(ကဗျာ)များကို အဖွဲ့ဝင်​ ၆ ဦးပါဝင်​သည့်​ အယ်​ဒီတာ အဖွဲ့က ​ရွေးချယ်​မည်​ဖြစ်​ပြီး အွန်​လိုင်း​ပေါ်တွင်​ ဖတ်မိသမျှ ​ကဗျာများထဲမှ ၄င်းတို့ နှစ်​သက်​ရာ ကဗျာများကို ​ရွေးချယ်​​ဖော်​ပြသွားရန်​ စီစဉ်​ထားပြီး အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ယခု ကာလတွင်မဂ္ဂဇင်းများနည်းပါးလာသောကြောင့် စာမျက်နှာဖြတ်သန်းမှု အားနည်းနေသည့် ကဗျာဆရာ လူသစ်များကို နေရာရစေရန် ရည်ရွယ်သောကြောင့် ထုတ်ဝေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း ပြောပြပါတယ်။ ကဗျာ၊ ကဗျာဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ၊ အင်တာဗျူး၊ နိုင်ငံတကာစာပေ၊...
တရားရုံးက လက်ခံရန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်သော်လည်း လယ်သမားများက ဦးပိုင်ကိုတရားစွဲမည် ဝင်းနန္ဒာ (Myanmar NOW) မိုးမခ၊ မေ ၁၈၊ ၂၀၁၈ မေ ၁၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှ သတင်းသမားများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး လယ်သိမ်းခံရမှု နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေများကို ရှင်းပြသည့် အစီအစဉ်တွင် တွေ့ရသည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကျောက်တန်းမြို့နယ်မှ တောင်သူတချို့ (ဓာတ်ပုံ – ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now) ရန်ကုန် – စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲလျှင် တရားရုံးများက အမှုလက်ခံရန် တွန့်ဆုတ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီ အမှုကိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ကာ တရားစွဲသွားမည်ဟု မကြာမီက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သီလဝါလယ်သိမ်းခံ လယ်သမားဘက်က လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမြင့်သွင်က Myanmar Now ကို ပြောသည်။...
ဘကြီးမိုး ၈၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့စကား ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်)၊ မိုးမခ၊ မတ် ၁၈၊ ၂၀၁၈ တကယ်တော့ ဘကြီးက စာရေးဆရာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာတွေကို ဘာသာပြန်တဲ့သူပါ။ သူများရေးထားတဲ့ စာကို ကိုယ့် မြန်မာတွေ ဖတ်ရအောင် ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ သူပါ။ စာရေးဆရာ အစစ်မဟုတ်ပါဘူးကွာ ဟု မွေးနေ့ပွဲတွင် အမှတ်တရ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အနေနဲ့လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စတင်တည်ထောင်စဉ်က ဗဟိုကော်မတီဝင်အနေနဲ့ ပါခဲ့တာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲလည်း မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ထောင်ထဲမှာ နေနေရတာနဲ့ပဲ ဘကြီး ဘဝမှာ နိုင်ငံရေး မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဆောင်းပါးတွေ ရေးတာများလို့ ဆောင်းပါးရေးဆရာလို့ ပြောရင်တော့ ရတာပေါ့နော်ဟု ဘကြီးမိုး ( ဒါရိုက်တာမောင်မိုးသူ) က ရယ်မောရင်း အမှတ်တရ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။...
စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ မောင်မိုးသူ အသက် (၈၁) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ ပြုလုပ် K (ဓာတ်ပုံ – Friends Of Moemakha) (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၈ စာပေလောက၊ နိုင်ငံရေးလောကမှ ဘကြီးမိုးလို့ ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာခေါ်လေ့ရှိတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ ပန်းချီဆရာ မောင် မိုးသူ အသက် (၈၁) ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှ ယနေ့ မေလ (၁၇) ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီကနေ နေ့လည် (၁၂) နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ဘကြီးမိုးအားချစ်ခင်သူ စာပေလောက၊ နိုင်ငံရေးလောကမှ လူဦးရေ (၅၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့...
လူနှင်းချို (မတ္တရာ) ● နိုင်ငံ​တာ်​ ဓာတ်​စာ (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ဒုက္ခ​တွေပင်​လယ်​​ဝေ​နေတာ​တောင်​ ​ဈေးဆစ်​ခံရတဲ့ နာဂစ်​မ​လေးနဲ့ ငါတိုင်​ပင်​ခဲ့ဖူးတယ်​ ငါရင်​နာတယ်​ သူဟာ လှလွန်းလို့ အ​မွေးခံရတဲ့ ငါးက​လေးတကောင်​လည်းမဟုတ်​ခဲ့ပါ ငါရင်​နာတယ်​ ​ခေတ်​ဆိုးကြီးရဲ့ရန်​ကွယ်​အဖြစ်​ ​ဆွဲမိဆွဲရာလှမ်းဆွဲမိချိန်​ အားကိုးရာ​ကောက်ရိုးတမျှင်​ရဲ့ဓားချက်​​အောက် ​အသက်​​ပျောက်​ခဲ့ရတဲ့ သားမိသုံး​ယောက်​နဲ့ ငါတိုင်​ပင်​တယ်​ ငါရင်​နာတယ်​ သူတို့ဟာ တုတ်​ဓားမပီးတဲ့ အငတ်​တိုင်းသူပြည်​သား​တွေပါ ​သေဆုံးချိန်​မှပဲ ​ဝဝလင်​လင်​ထွက်​ပြခဲ့တဲ့ သူတို့​သွေး​တွေ ငါရင်​နာတယ်​ ​သွေးမြင်​ရင်​ မူး​မေ့သွားတတ်​တဲ့ ဥပ​ဒေ​တွေ ဘယ်​ကလာသလဲ ဓားမြင်​ရင်​​ကြောက်​​တတ်​တဲ့ ဥပ​ဒေ​တွေ ဘယ်​ကိုသွားမှာလဲ လမ်းခွဲထွက်​သွားတဲ့ ဥပ​ဒေ​တွေက ဘယ်​​နေရာမှာဆုံကြမှာလဲ ငါရင်​နာတယ်​ ဖျား​နေတဲ့နိုင်​ငံအတွက်​ ဥပ​ဒေဟာ ဓာတ်​စာ ဖြစ်​တယ်​ ဓာတ်​စာ​တွေဟာ ဘယ်​အရပ်​​ဒေသမှာ ဝင်းမှည့်​​နေပြီလဲ မိသားစုတစ်​စု​တောင်​ လှိုင်းတစ်​ချက်​ပုတ်​နဲ့...
လှကျော်ဇော ● တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး – အပိုင်း (၆)
လှကျော်ဇော ● တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး – အပိုင်း (၆) (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂ဝ၁၈ ● ဗလောင်းဗလဲ ကာချုပ် ၂ဝ၁၈ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့က၊ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်က တပ်ကိုမိန့်ခွန်းပေးရာမှာ တပ်ကို အကြီးအကျယ်မွှန်း အား ဆေးတင်ပေး (နောက်ဆုံးပေါ် လက်နက်အသစ်အဆန်းတွေ ဆက်လက်ဝယ်ယူနေမယ်) ပြီး တခါ တဖက်ကလည်း ငြိမ်း ချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာ အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်း အစိုးရနဲ့တန်းတူထားပြောသွားပေမယ့် နောက်တလကျော် အကြာလေး (ဧပြီလ ၃ဝ ရက်နေ့) မှာပဲ၊ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီဝင် သံအမတ်များနဲ့တွေ့ဆုံရာမှာတော မိမိတို့နိုင်ငံတွင် နိုင် ငံ၏ခေါင်းဆောင် သမ္မတရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် သမ္မတ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်သာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်သာရှိသည်လို့ ဆိုပြန်...
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်နှင့် လူငယ်စာပေဖန်တီးသူတို့၏အရွေ့ (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၈ လူငယ်များ ကလောင်သစ်များ စာပေဝါသနာရှင်များနှင့် ဝါရင့်စာပေဖန်တီးသူ ဆရာ/မကြီးများ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ စာစောင် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတို့ကြားတွင် လိုအပ်နေသော ပေါင်းကူးတံတားလေးတစ်ခုဖြစ်စေရန်အလို့ငှာ ဝါသနာအရ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ အက်ဆေး၊ ဝတ္ထုတို၊ ဝေဖန်ရေး၊ နိုင်ငံတကာစာပေ၊ ဘာသာပြန်စာပေ စသည်တို့ကို ရေးသားနေကြပြီး ပရင့် တက်မီဒီယာများပေါ်သို့ဖော်ပြရန် အခက်အခဲရှိသူများ အယ်ဒီတာတို့၏ စာမူရွေးချယ်ပုံမူများ တိုက်၏စာမူရွေးချယ် ဖော်ပြ ရေးမူများအပြင် ကလောင်သစ်များကိုဦးစားပေးကာ ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးသောတိုက်များအကြောင်းတို့ကို အနည်းအကျဉ်းမျှ ဆွေးနွေးတင်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေနိုင်သော အချို့တိုက်များကိုလည်း ဖြည့်စွက်စဉ်းစားကာ နားလည်ပေးကြစေချင်ပါ သည်။ လူငယ်များ၊ ကလောင်သစ်များ၊ ဝါသနာရှင်များအတွက် စာတိုပေစကလေးများ ရေးသားကြပါသော်လည်း ပရင့်တက် မီဒီ ယာပေါ်သို့ရောက်ရန်...
ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – ရပ်ပြစ် ရှစ်ပါး (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း သာလှ Related posts ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သီချင်း (0) ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – ငြိမ်းချမ်းရေး၏ ပုံတူကားချပ်များ (0) ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – မြေအောက်မြို့တော် ဆိုလို့ (0) ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – တော်တဲ့သူ (0) ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – သည်မိုး သည်လေ သည်လူတွေနဲ့ (0)
K ငြိမ်းချမ်း – စာအုပ်အငှားဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုဟာ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးအဆင့်ထဲ ရောက်လာနေတယ်
K ငြိမ်းချမ်း – စာအုပ်အငှားဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုဟာ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးအဆင့်ထဲ ရောက်လာနေတယ် (ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းထဲက ထင်ပေါ်စာအုပ်အငှားဆိုင်နဲ့ စကားပြောခြင်း ) (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာအုပ်အငှားဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုဟာ ထုထည်ကြီးမားစွာ တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖတ်ချင်တုန်း စာ အုပ်အငှားဆိုင်တန်းပြေးပြီး ငှားဖတ်၊ နောက်ကျလို့ကတော့ တန်းစီတော့ပဲ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာအုပ် တဆိုင် မရ တဆိုင် ပြေးရဖတ်ခဲ့ရတာ။ သမိုင်း၊ သုတ၊ ရသအစုံအလင် အသက်အရွယ်အလိုက် ဖတ်ရှုရခဲ့ရတဲ့ခေတ်များကို လွမ်းဆွတ်တသရုံ မှတပါး စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေဟာ ပျောက်ကွယ်နေပါပြီ။ ခေတ်တွေ ရွေ့လျားလာတာနဲ့အမျှ အဲဒီအရသာတွေဟာ ပျောက် ဆုံးခဲ့ရပါပြီ။မြန်မာပြည်တ၀ှမ်း စာအုပ်အငှားဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုဟာ ခုခံထားလို့မရအောင် ကျဆုံးနေပါတယ်။ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ကျဆုံး နေရတဲ့ စာအုပ်အငှားဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုဟာ ယခုကာလစီးပွားရေးအရရော အခြားအခြားသောအကြောင်းမျိုးစုံကြောင့် နာ လန်မထူနိုင်တဲ့ဘ၀သို့ဆိုက်ရောက်နေပါတယ်။...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Bark the wrong tree (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မေ ၁၇၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
မင်းလူ ၆၄ နှစ်၊ Yangon Book Plaza မေလ ၁၉ ရက် K (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာမင်းလူ ၆၄နှစ်ပြည့် မင်းလူနှင့်သူ၏ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ် Yangon Book Plaza မှာ ပြုလုပ်မယ် ကွယ်လွန်သူစာရေးဆရာ မင်းလူ အသက် ၆၄နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ မေလ ၁၉ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၂နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော် သံဈေးရှိ Yangon Book Plazaမှာ မင်းလူနှင့်သူ၏ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျင်းပသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ဆရာမင်းလူဟာ သူ့ကိုယ်သူ မျောက်လူလို့ သုံးနှူံးကာ စာပေလောကက စာရေးဆရာများကို ဇာတ်ကောင်လုပ်ကာ ၀တ္ထု များများစွာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီနီအိပ်မက်များ – (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၇၃) (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ● အပြုတ်တိုက်ရေးနှင့် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး ထိုစဉ်ကာလ (၁၉၇၇) က CPB အနေနှင့် ပဲခူးရိုးမ ၆၄ လမ်းစဉ်အား ထပ်တူပြုလိုက်နာခြင်းမရှိတော့သော်လည်း ကိုင်စွဲထား သည့်မူမှာ စစ်အစိုးရအား အပြုတ်တိုက်ရေးဖြစ်သည်။ အလားတူပင် ဗိုလ်နေဝင်း၏မူဝါဒမှာလည်း သောင်းကျန်းသူ အမြစ် ပြတ်ချေမှုန်းရေးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအရဆိုလျင်တော့ အလွန်ရှင်းလင်းသည့်ကာလဟု ဆိုရမည်။ ကြားလမ်းကြောင်းမရှိ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိ။ peace talk ဟုဆိုကြသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းမရှိ။ သူသေ ကိုယ်ရှင် စစ်မြေပြင်တွင် ပြတ်ပြတ် သားသားပြင်းပြင်းထန်ထန် စာရင်းရှင်းကြသည့်ကာလဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်လည်း ဤစစ်ပွဲတွင်ပါဝင်သူအားလုံးအတွက် အရေးကြီးသည်မှာ စစ်ရေးအရအောင်ပွဲခံဖို့ဖြစ်သည်။...
ကိုအောင်မှိုင်း ● ဥပါယ်တမျှင် (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၈ အို နတ်သမီး သုခိတာ အသင်၏ စောင်းသံနှင့်တေးသီသံတို့ကား ငါတို့အတွက် အိပ်မက်ကောင်းများစွာကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပါ၏။ အို နတ်သမီး သုခိတာ အသင်၏ ဂါထာမန္တံတို့ကား ဖုတ်သရဲ ပြိတ္တာတို့အား ကြောက်ဒူးတုန်စေခဲ့ပါ၏။ အို နတ်သမီး သုခိတာ အသင်၏ သွန်သင်ပြသမှုတို့ကား လူသူတော်ကောင်းတို့အား တရားဓမ္မဖြစ်စေခဲ့ပါ၏။ အို နတ်သမီး သုခိတာ အသင်၏ ယုံကြည်သက်ဝင်မှုတို့ကား လူသားအားလုံးအတွက် အင်အားကောင်းများဖြစ်စေခဲ့ပါ၏။ အို နတ်သမီး သုခိတာ သင်၏စောင်းသံနှင့်တေးသံအား အဘယ်ကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ပါသနည်း။ သင်၏ဂါထာမန္တံတို့အား အဘယ်ကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ပါသနည်း။ သင်၏သွန်သင်ပြသမှုတို့အား အဘယ်ကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ပါသနည်း။ သင်၏ယုံကြည်သက်ဝင်မှုတို့အား အဘယ်ကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ပါသနည်း။ အို နတ်သမီး သုခိတာ လောကတွင် ဖုတ်သရဲပြိတ္တာတို့ကား တကျော့ပြန်သောင်းကျန်းလာကြချေပြီ။...
ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ စင်ကာပူကို ကျော်ရမည် … (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုတေ Related posts ကာတွန်း ကိုတေရဲ့အတွေး (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ နေရာယူတတ်သူ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ စံချိန်သစ်တင်လိုသူတွေ …. (0)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● မဟာဓါတ်အားလိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းလျှပ်စစ် (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၈ တရုတ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို မြန်မာကိုဖြတ်သန်းပြီး မဂ္ဂါဝပ် ၁,၅ဝဝ ရောင်းချပြီး၊ မြန်မာက လာအိုထံမှ လျှပ်စစ်ဝယ်ရန်။ ရှမ်း ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကို မဟာဓာတ်အားလိုင်းဖြတ်သန်းပြီး တရုတ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို လျှပ် စစ်မဂ္ဂါဝပ်တွေ ရောင်းချမယ်။ ‘သုံးနိုင်ငံဝန်ကြီးအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်မှာလုပ်ပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးသုံးတဲ့ ဓါတ် အားတဝက်ကို ဖြတ်သန်းသွားမယ် ဆိုပါတယ်။ ဖြတ်သာသွားမယ်၊ မနားတယ် ဓါတ်ငွေနဲ့ရေနံ ပိုက်လိုင်းများ၊ အခု လျှပ် စစ်မဟာဓါတ်အားလိုင်း၊ စဉ်းစားရခက်ပါတယ်။ မြန်မာ-တရုတ်-ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှသုံးနိုင်ငံကြား လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် သုံးနိုင်ငံ လက်မှတ်ထိုးပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ အကောင်အထည်ဖော်မည့် One...
ကြွက်နဲ့ကြောင်မောင်မော် ကွ န်း(မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ကြွက်အနံ့ကို ကြောင်သိတယ်ကြောင်အနံ့ကိုလည်း ကြွက်သိတယ် ။ အနံ့ကိုသိကြတာချင်းအတူတူအကင်းပါးကြတာကလည်း ဒင်းတို့ချင်း ပညာခန်းပြိုင်တဲ့ထိ ။ ကြောင်ရဲ့အကင်းပါးမှုက သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်တယ် ကြွက်ရဲ့အကင်းပါးမှုက သူ့ကိုယ်သူ မယုံရဲဘူး စိတ်မချဘူး ။ ကြောင်ရဲ့အကင်းပါးမှုက ကြွက်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့ ကြွက်ရဲ့အကင်းပါးမှုက ကြောင်ရဲ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ ။ ကြောင်ပြေးလမ်းက ကြွက်ရှိရင် ရှည်လျားကျယ်ဝန်းတယ် ကြွက်ပြေးလမ်းက ကြောင်ရှိရင် တိုတောင်းကျဉ်းကျုံ့တယ် ။ ကြောင်က သူ့ပြေးလမ်းက်ို ယုံကြည်မှုနဲ့သတ္တိနဲ့တည်ဆောက်တယ် ကြွက်က သူ့ပြေးလမ်းကို အကြောက်တရားနဲ့တည်ဆောက်တယ် ။ ကြောင်ပြေးလမ်းပေါ် ကြွက်လုံးဝမလာရဲပေမယ့် ကြွက်ပြေးလမ်းပေါ် ကြောင်ကအပျော်ကြီးပျော်နေတတ်တယ်...
“သွေးစွန်းသော ကျောက်စိမ်းခရီး” ဓာတ်ပုံပြပွဲ မေလ ၁၆ရက် K (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၈ Journey of The Blood Jade အမည်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲ မေလ ၁၆ ရက်မှ ၁၈ရက်ထိ ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့နယ် အလုံလမ်းရှိ People’s Parkအတွင်းရှိ Yangon Gallery မှာ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲကနေ ၆နာရီထိ ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ သွေးစွန်းသော ကျောက်စိမ်းခရီးအမည်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့ရှိ ကျောက်စိမ်းများ အ လွန်အကျွံထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၅ နှစ်တာအတွင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံများကို ပြသသွားမယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ပြပွဲကို Natural Resource Governance Institute အဖွဲ့က...
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ – နည်းပညာက လူသတ်သလား (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းမှာ နည်းပညာတော်လှန်ရေးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အပြောင်းအလဲခေတ် ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ ၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ တပါတီ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်နေခဲ့ကြတုံးပေါ့။ ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းမှာ နည်းပညာတော်လှန်ရေးအသီးအပွင့်တွေ ခံစားရတယ်။ အင်တာနက်တို့ ဆဲလ်ဖုန်းတို့ မိုက်ခရိုဝေ့တို့။ လူတွေအများသိကြတာကတော့ ကမ္ဘာမှုပြုခြင်းဖြစ်စဉ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ Globalization တဲ့။ နယ်စည်းမခြားပဲ စီးပွားရေး လူမှုရေး အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်လာတာ။ ၂၀၀၀ နှောင်းပိုင်းကတော့ ဒီဂျစ်တယ်ပြုခြင်းဖြစ်စဉ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ Digitization ပေါ့။ လူမှုဘ၀တွေ နိုင်ငံရေးဘ၀တွေကို ဒီဂျစ်တယ်လှိုင်းကြီးကနေ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်။ အချက်အလက် အတွေးအခေါ် အထင်အမြင်တွေဟာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်တဲ့ ဖလ်သားပြင်ပေါ်တွေချည်းကနေ လာတယ်။ အဲသည်ကနေ...
၀င်းအောင်ကြီး (မောင်အောင်မွန်) – သတင်းစာပီသာလျှင် စာတတ်သူတိုင်းဖတ်ကြသည် ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၃၅) (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၈ (၁) အမေရိကန်သမ္မတာ ဂျက်ဖာဆန်က သူ့အား အစိုးရသာရှိပြီး သတင်းစာမရှိသည့်တိုင်းပြည်နှင့် သတင်းစာများသာရှိပြီး အစိုးရမရှိသည့်တိုင်းပြည် ဘယ်သင်းကို ယူမည်နည်ဟု မေးလာလျှင် ဒုတိယကိုယူမည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တိုင်းပြည်အတွက် သတင်းစာက အစိုးရထက် ပိုအရေးပါ ပိုသစ္စာရှိသောကြောင့်ဟု ရေးသားဖူး၏။ (၂) မြန်မာပြည်တွင် သတင်းစာကောင်းများရှိခဲ့ဖူး၍ ဖတ်ကြပုံရေးပါမည်။ ကျွန်တော့်အဖွားသည် စာမဖတ်တတ်ပါ။ ရွာ၏ဈေးထဲက ဆိုင်များ၊ ပျံကျဈေးသည်များထံမှ အခွန်ကောက်ခွင့် ကန်ထရိုက်၊ ရွာနှင့်ငါးမိုင်ခန့်ဝေးသော ကျောက်ထုစခန်းရှိ အကျဉ်းထောင်သို့ စားနပ်ရိက္ခာ တင်သွင်းခွင့် ကန်ထရိုက်များကို အခြားအမျိုးသားကြီးများနှင့် အပြိုင်လေလံစွဲရသောကြောင့်၊ အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်နှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရ၏။ တော်ပါသေးသည် အဲဒီမျက်နှာဖြူကြီးတွေက ဗမာလိုပြောတတ်...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ပေါက်ဖော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုသံ (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် Related posts ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ ကြိုပြင်ထားကြပါ … (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ ပျောက်သောသူ ကြာရင်မေ့ (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ … (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● ကြွားစရာ (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု (0)
Page2of 896«12345...896»
>Ashin Nanika - Bless You Manner
>စကဿာပူရောက် သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံဝိုင်းတော်သားမဵာိးံငြ့် ဦးပန်တဵာ စကားလက်ဆုံ
>Burmese Refugees in Oakland Living in Extreme Poverty Read more: http://www.care2.com/causes/burmese-refugees-in-oakland-living-in-extreme-poverty.ht